Serivisy teknika sy taorian'ny varotra - Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd.
Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd dia mitaky ny fitakian'ny mpanjifa hatrany ho fitarihan'ny ezaka, manitrikitrika ny "Ny fitantanana ny finoana tsara, ny kalitao voalohany, ny mpanjifa no tampony" ho politika fototra, manamafy ny fananganana tena. Ary manolo-tena hanome serivisy fanohanana avo lenta sy lavorary mba hiantohana ny traikefa mividy tsara ho an'ny mpampiasa
Noho izany, manangana rafitra matotra aorian'ny fivarotana izahay:
Mametraka foto-kevitra serivisy aorian'ny varotra tsara, mampanantena izahay fa hanao asa fiofanana tsara ho an'ny mpiasa, hanatsara ny fahalalan'ny vokatra, ny fahatsiarovan-tena amin'ny serivisy ary ny haavon'ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Torohevitra an-tserasera maimaim-poana: Serivisy fanampiana ara-teknika amin'ny mailaka, telefaona;
Mametraha rakitra feno ho an'ny mpanjifa tsirairay:
mampihatra fitantanana manara-penitra, hatrany am-piandohana ny fifandraisana, ny varotra, ny fandefasana hatramin'ny fampiasana farany, ary miantoka fa lavorary ny dingana rehetra.
Fantaro tsara ny mpanjifa:
mianatra ny filan'ny mpanjifa manokana amin'ny alàlan'ny serivisy manokana sy manokana, mamaly ny filàna ary manampy ny mpanjifa hamaha ny olany.
taona maro lasa izay, ny tsena simika dia misy fiovana lehibe, noho izany ny vidin'ny tsena sy ny fandefasana dia miova haingana kokoa. Ampahafantarinay mialoha ny mpanjifantsika ny fiovan'ny akora sy ny vidiny, mba hahafantaran'izy ireo tsara ny tsena, ary hanomanana mialoha mialoha ny varotra amin'ny ho avy.
Kalitaon'ny vokatra tompon'andraikitra:
fehezo ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny loharanon-karena, ary manaova asa tsara amin'ny fanandramana kalitao alohan'ny fandefasana, hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa ny vokatra.
Manana ekipa teknika matihanina izahay, izay afaka manolotra fanampiana ara-teknika feno amin'ny fotoana. Ary manampy amin'ny famahana ny olana amin'ny fampiharana, manatsara ny raikilan'ny vokatra hahazoana ny vokatra kendrena.
Mandritra izany fotoana izany dia miara-miasa amin'ny University ihany koa izahay, mitazona ny kalitaon'ny vokatra, manadihady ary mamorona vokatra vaovao, fampiharana vaovao.
Manome serivisy fakan-kevitra feno ihany koa izahay ho an'ny fampandrosoana any ivelany sy ny fampiraisana ary ny fahazoana orinasa avo lenta.